सरकार र प्रा डा. केसीबीच नौबुँदे सहमति भएपछि अनशन तोडियो (बुँदासहित) « Pahilo News
सरकार र प्रा डा. केसीबीच नौबुँदे सहमति भएपछि अनशन तोडियो (बुँदासहित)
प्रकाशित मिति : 27 July, 2018 6:14 am
काठमाडौं, १० साउन । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीच नौं बुँदे सहमतिसँगै डा। केसीको २७ दिन लामो अनसन तोडिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विहिवार राती भएको सहमतिपछि डा.केसीले अनशन तोडेका हुन् । सहमतिपछि अनसन तोडाउन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र नेता सुवास नेम्वाङ त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए । डा. केसीलाई प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा र नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले जुस खुवाएर अनशन तोडाए ।
यो सहमतिसँगै डा.केसीले राखेका अधिकांश माग पूरा भएका भएको डा।केसी पक्षधरले जनाएको छ । उनका मागअनुसार संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा २२ वटा संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा केसीका तर्फबाट संशोधनका लागि माग भएका २२ वटा बुँदामा संसदीय प्रक्रिया अनुसार संशोधन गर्न सहमति गरेको छ ।
डा।केसीसँग विहिबार दिउसो नै अन्य विषयमा सहमति भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने विषयमा सहमति हुन नसक्दा वार्ता लम्बिएको थियो । अब संसदबाट विधेयक पारित हुने हो भने अबको १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खुल्ने छैनन् । तर, आशयपत्र पाइसकेकाको हकमा सरकारले त्यस्ता प्रस्तावित कलेजको सम्पत्ति खरिद गर्ने वा उपत्यका बाहिर सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।